Linux uye Yakachengeteka Boot. Iko kukanganisa kwatisingakwanise kudzokorora | Linux Vakapindwa muropa
Linux uye Yakachengeteka Boot. Iko kukanganisa kwatisingakwanise kudzokorora
In the Nyaya yapfuura Ini ndarangarira chinoitika pamberi pechinodikanwa cheMicrosoft chekuda iyo TPM vhezheni 2 module kuti ikwanise kushandisa Windows 11. Ndiri kutaura nezvechinodiwa chekuti makomputa ane Windows 8 agadzike-ashandise kushandisa UEFI pachinzvimbo cheBIOS yebhootloader uye iyo Yakachengeteka Boot module yakagara yaiswa. Iye zvino ndiri kuzotaura nezve iyo, mumaonero angu, nzira isiri iyo iyo Linux yakabata nedambudziko.
1 Linux uye Yakachengeteka Boot
2 Linus izwi
Linux uye Yakachengeteka Boot
Secure Boot inoda kuti chirongwa chega chega chinotanga chiine siginecha inovimbisa chokwadi chayo chakachengetwa mudhatabhesi yeyeye-isina kugadzikana ndangariro yebhodhi reamai. Pane nzira mbiri dzekuonekwa mune iyo dhatabhesi. Inosanganisirwa nemugadziri kana inosanganisirwa neMicrosoft.
Mhinduro yakasvikwa nemamwe ekuparadzirwa kweLinux neMicrosoft yaive yekuti iyi kambani yakagamuchira siginecha yebhinari iyo yaizotungamira kuvhura iyo boot loader yekugovera kwese. Aya mabhinari akaitwa kuti awanikwe kunharaunda.
Shure kwaizvozvo, iyo Linux Foundation yaizovhura generic mhinduro iyo inogona kutorwa neese kugoverwa.
Kutsvaga mhinduro iri nani, mugadziri weRed Hat akakurudzira zvinotevera kuna Linus Torvalds:
Unogona here kuisa chigamba ichi ndapota?
Inopa basa iro makiyi anokwanisa kuwedzerwa zvine simba kune kernel inomhanya yakachengeteka boot mode. Kuti tibvumidze kiyi kutakurwa pasi pemamiriro akadaro, tinoda kuti kiyi nyowani isainwe nekiyi yatakatove nayo (uye yatinovimba nayo), uko makiyi isu "atova nawo" anokwanisa kusanganisira iwo akaiswa mukati meiyo kernel, avo vari mudura reEFI uye iwo eiyo cryptographic Hardware.
Ikozvino "keyctl wedzera" inenge yatobata zvitupa zveX.509 zvakasainwa seizvi, asi Microsoft kusaina sevhisi inongosaina chete inoitiswa EFI PE mabhainari.
Tinogona kuda kuti mushandisi atangezve kupinda muBIOS, wedzera kiyi, uye wozodzokera kumashure, asi mune mamwe mamiriro ezvinhu isu tinoda kukwanisa kuita izvi apo kernel iri kushanda.
Nzira yatauya nayo yekugadzirisa izvi ndeyekuisa chitupa che X.509 chine kiyi muchikamu chinonzi ".keylist" mune EFI PE binary uye wozotora Microsoft yakasainwa binary.
Mhinduro yaLinus (Ngatirangarirei kuti kwaive pamberi pekudzoka kwake pamweya kuti atarisezve hunhu hwake muhukama nevamwe vanhu), yaive inotevera:
C ziviso: Chinyorwa chinotevera chinosanganisira kumhura
Vakomana, iyi haisi jongwe inoyamwa makwikwi.
Kana iwe uchida kushandisa iyo PE mabhinari, ndapota enderera. Kana Red Hat ichida kusimbisa hukama hwayo neMicrosoft, ndiro * dambudziko * rako. Izvo hazvina chekuita nekernel yandinochengetedza. Zvirinyore kuti iwe uve nesiginjini injini iyo inojekesa iyo PE binary, inosimbisa masiginecha, uye kusaina makiyi anouya nekiyi yako wega. Iyo kodhi, nekuda kwaMwari, yakatonyorwa kare.Iyo iri muchikumbiro chakadai chekubatanidzwa.
Nei ndichifanira kuva nehanya? Nei kernel ichifanira kutarisira nezvevamwe vasina hunhu "isu tinongosaina mabhinari ePE" mapenzi? Isu tinotsigira X.509, inova ndiyo muyero wekusaina.
Izvi zvinogona kuitwa padanho revashandisi. Iko hakuna chikonzero chekuzviita mukernel.
Maonero angu ndeekuti Linus aive akaruramisa kamwechete. Saizvozvo kana iyo Linux Foundation kana kugoverwa kwaifanirwa kunge kwakapihwa nhema neMicrosoft. Ichokwadi kuti vashandisi vangadai vakarasika. Asi, sezvakazoitika gare gare, Windows 8 yaive yakundikana uye XP yakaramba ichitonga kwenguva yakareba.
Chokwadi ndechekuti kana Microsoft yakatarisana nehondo, inomanikidzwa kutevedzera zviyero. Zvakaitika paakakundikana neSIlverlight uye akamanikidzwa kutora iyo HTML 5.webhu standard. Zvakaitika apo aifanira kusiya web kupa injini kuvandudza uye base Edge paChromium.
Kana isu hatifanirwe kukanganwa kuti kukwezva programmers yaifanira kusanganisa chero chinhu chidiki pane kugona kumhanyisa Linux paWindows.
Kugoverwa kweLinux kuri munzvimbo iri nani kupfuura nakare kose kupa vashandisi imwe nzira yekuenderera vachishandisa zvakakwana Hardware Hardware.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux uye Yakachengeteka Boot. Iko kukanganisa kwatisingakwanise kudzokorora
Chaizvoizvo, hapana munhu muGNU / Linux zvakasarudzika anofanira kuenda kuMicrosoft kana chero kambani, isu tinofanirwa kuve vanopikisa uye vanotsigira rusununguko mukomputa, isu tatova nezvakakwana nemajeri enhare mbozha, zvekuti izvozvi isu tinofanirwa kumedza zvinoda kuti chete batsira kambani imwe.
Sekuziva kwangu, sarudzo dzaMicrosoft hadzina kumbobetsera kunyange necosystem yayo, unongova mubvunzo wekushambadzira mukutenda kuti kana usingakwanise kumhanya tpm 2, iwe unozoshandura makomputa kuti ukwanise kumhanya w 11, kana paine chinhu chine hombe muMicrosoft ndiyo ego, ramangwana iri linux kwete windows, uye kwandiri sarudzo yaMicrosoft ndiyo yakanakisa kuunza vashandisi padyo nelinux
Pindura kuna ja
Zviratidzo, blockchain uye wallets. Pfungwa dzekutanga nezveNFTs
Windows 8 uye UEFI. Iyo inotyisa mamiriro eWindows 11 uye TPM